डेंगु बाट कसरी बच्ने ? - Tulsipur Khabar डेंगु बाट कसरी बच्ने ? - Tulsipur Khabar
काठमाण्डौ – तराईसहित विभिन्न जिल्लामा फैलिएको डेंगुबाट अहिलेसम्म झण्डै ३ हजार ५ सय बिरामी भएका छन् ।गएको वैशाखदेखि अहिलेसम्म ४२ जिल्लामा ३ हजार ४ सय २५ जनामा डेंगुको संक्रमण भएको इपिडिमियोलजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ । बितेका ४ महिनामा सुनसरीमा मात्रै ३ हजार २५ जना डेंगुका बिरामी भेटिएका छन् । मोरङमा ८१, झापामा २९ सहित प्रदेश एकमा ३ हजार १ सय ५२ जना बिरामी भएका हुन् ।
काठमाण्डौमा ६ र ललितपुरमा तीन जनामा डेंगु भेटिएको हो । प्रदेश तीनमा मकवानपुरमा सबैभन्दा धेरै ८३ जना डेंगुबाट प्रभावित भएका छन् । बितेका ४ महिनामा प्रदेश तीनमा १ सय २६ जना बिरामी भेटिएका महाशाखाले जनाएको छ । त्यस्तै गण्डकीमा २६, प्रदेश ५ मा ९६, कर्णालीमा एक र सुदूर पश्चिममा १२ जना बिरामी भएका छन् । लामखुट्टेले टोक्दा डेंगु हुने गर्छ । पानी जम्ने ठाउँमा एडिज लामखुट्टे बढी सक्रिय हुने गर्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओका अनुसार डेंगुका कारण बढी ज्वरो आउँछ । टाउको, पेट र जिउ दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने, आँखामुनि दुख्नेजस्ता डेंगुका साधारण लक्षण हुन् । डेंगुबाट बच्न घर वरपर सफा राख्ने, झुलको प्रयोग गर्ने, झ्याल ढोकामा जाली राख्ने र लामखुट्टेको टोकाइबाट जोगिनुपर्ने डाक्टरको सल्लाह छ ।
डा.केसीलाई अनशनस्थल छोड्न प्रहरीको दबाव
रेडीयोग्राफिको स्थापना दिवसमा फलफूल वितरण
आज र भोली भिटामिन ‘ए’ खुवाईदै